Umahluko we-Semalt: KuPhezulu kuGoogle nangaphaya
Kunokuba nzima ukuxelela iiarhente zentengiso ngokwahlukeneyo.
Njengoko kuvela, bonke balungile kwintengiso ngokwabo. Xa bonke besenza amabango afanayo amangalisayo- fumana ishishini lakho phambi kwamehlo amaninzi, bathengise intengiso yakho, babandakanyeke kwisiseko sakho somthengi- uyazi njani ukuba uza kusebenzisa ntoni, kwaye yeyiphi ongayityesheliyo?
Ukuqonda indlela yokwahlula ingqolowa kumququ, masijonge kwiarhente egcwele izinto ezenza izinto ngokufanelekileyo: Semalt.
I-Semalt iyinkonzo ye-SEO kunye nentengiso eyasekwa ngonyaka ka-2013. Inkampani yile arhente igcweleyo, into leyo ethetha ukuba inokuhambisa umkhankaso opheleleyo wentengiso ukusuka ekuqaleni ukuya ekugqibeleni. Inetalente ethile kwiinkalo ze-SEO kunye nohlalutyo, apho inikezela ngeenkonzo ezizodwa.
Kwiminyaka ukusungulwa kwayo, uSemalt ukhule waba ngumkhosi wentengiso wehlabathi. Ukuba uhlalutye indawo ezizigidi eziyi-1.5 kunye nokuziqhayisa ngaphezu kwe-600,000 yabasebenzisi, uSemalt uye wakhawuleza waba yinkokeli kwi-SEO kunye nendawo yokuthengisa kwaye akabonisi zimpawu zokuthoba isantya. Iarhente iqhutywa liqela elinetalente labadali kunye neengcali, onokuthi udibane naye apha!
Unokuthi, "Kulungile kwaye kulungile, kodwa ndazi njani ukuba uSemalt ufanele ixesha lam kunye nemali?" Ukuphendula lo mbuzo kuya kufuneka sihlolisise iinkonzo zaso.
Semalt kunye ne-SEO
Yintoni enika le arhente malunga neenkonzo ze-SEO? Kuya kufuneka ulumke kwangoko kuyo nayiphi na inkampani yentengiso ethembisa umhlaba, okanye ingacacanga malunga nendlela iinkonzo zabo ze-SEO ezisebenza ngayo, njengoko olu luphawu lokuba bayakuthi bangaphantsi okanye ukuba bayakopela inkqubo yokubonelela ngeziphumo ezikhawulezayo kodwa zexesha elifutshane. .
Kwimeko kaSemalt, inkampani ibonelela ngeenkonzo ezintathu ezahlukeneyo ze-SEO: I-AutoSEO, i-FullSEO kunye ne-E-Commerce SEO, kwaye inika iinkcukacha malunga nokusebenza kwangaphakathi kwalowo.
Iphelele kuye nabani na ojonge ukudonsa iinzwane zabo kwihlabathi le-SEO, i-AutoSEO ibonelela abanini bamashishini isingeniso esikhawulezayo nesilula sokusebenza kweinjini yokukhangela. It:
Uhlalutya iwebhusayithi yakho
Ukulungiswa kwezinto eziphantsi
Ukukhetha amagama aphambili
Hambisa ingxelo rhoqo
Kwaye iyenza yonke le nto kancinci njenge- $ 0.99 !
Kulabo bafuna ukubona iziphumo zangempela kunye nexesha elide, akukho nto ithelekiswa nokuchukumisa komntu, kwaye yile nto kanye enikezelwa yi-Semalt's FullSEO package. Fumana uhlalutyo olunzulu, ukusebenzisa kunye nenkxaso kwiqela leengcali elonyuse inani lokugcwala kwiwebhusayithi kumazwe ali-177. Ukuba ufuna impumelelo yenjini yokukhangela, ufuna i-FullSEO.
Iiwebhusayithi zorhwebo zinikezela umngeni owahluke kancinci kwiiwebhusayithi ezingathengisi ngenkuthalo kwi-Intanethi. Isibonelelo se-E-Commerce SEO sikaSemalt senzelwe ukuphatha imibuzo ekhethekileyo ebuzwa ngokuthengisa iimpahla kunye neenkonzo kwi-intanethi, ngokujolisa imibuzo yotshintshiselwano kunye namagama aphambili asezantsi e-niche yakho, ngaloo ndlela ufumana abathengi abathile obajongileyo.
I-Semalt kunye nohlalutyo
Ulwazi ngamandla. Unokubetha kuphela abakhuphisana nawe kwaye ukhokele ukuthengisa ukuba uyabaqonda abakhuphisana nawe kunye nemarike. Iarhente egcwele isigxina kufuneka inikezele ngenkonzo ebanzi yohlalutyo enika inkampani yakho lonke ulwazi oluyidingayo ukuze iphumelele.
I-Semalt Analytics ikuvumela ukuba wakhe umfanekiso ogcweleyo wokuma kwendawo yakho yemarike. It:
Wenza njani wena kunye nabantu abakhuphisana nabo
Iimpawu eziphezulu zokuthengisa eziza kukunceda uye phambili
Vula ulwazi olunokukunceda ufumane iimarike ezintsha.
Kwakha iqonga lolwazi apho unokuqalisa khona isicwangciso esiliqhetseba seshishini.
Ukujonga ukuba semthethweni
Emva kokuba uqinisekisile imbali yearhente yentengiso, waqinisekisa ukuba zizele-zigcwele, kwaye ujongile ukuba banikezela ngeenkonzo ezintsha, ezisemgangathweni, eziqinisekisiweyo ekufuneka inkampani eyikhokelayo ifanelekile, lixesha lokuba uyihambise kwisihlwele. Ayikho indlela ebhetele yokujonga umgangatho weqabane lakho elinokubakho lokuthengisa kunokuba uve ngokuthetha nabo sele bejongana nabo ngaphambili.
Izifundo zamatyala yindlela elungileyo yokutshekisha ukuba isebenza njani iarhente, kunye nokuba ungalindela ntoni ukuba uza kuzisebenzisa iinkonzo zabo. I-Semalt ineempawu ezininzi zezifundo kwiwebhusayithi yayo, ikunika umbono kwimisebenzi yabo kunye neziphumo zabo.
Kukho indlela elula yokujonga ubunyani bearhente: gxuma kwi-Intanethi kwaye ubone ukuba ithini i-web jikelele. Ngenxa yenkululeko yolwazi olunikezwe yi-intanethi, ngoku akunakwenzeka ukuba inkampani ifihle into yokuba bathatha iindlela ezimfutshane okanye bengazizisanga izithembiso.
Jonga uphononongo lwe-arhente zikaGoogle kunye ne-Facebook. Ukuba, njengoSemalt, banenqaku loPhononongo lukaGoogle lwe- 4.5 / 5 kunye ne-Facebook Review amanqaku ka- 4.9 / 5 (kunye nabalandeli abayi-170,000) , unokuqiniseka ukuba ukhetho olukhulu. I-Semalt ikwabonelela ngamakhulu ubungqina obhaliweyo kunye nevidiyo kwindawo yayo, encedisa abathengi abanokubakho ukuba baqonde ngokuchanekileyo ukuba inkampani iyasebenza kunye nani.
Into elula enokunceda ukwahlula iiarhente ezingcono kwezinye kuphatheka kwakhona. Ufuna ukwazi ukuba ujongene nabantu bokwenyani abaya kukuqonda, kwaye abaya kuthi bonwabele ukusebenza nabo. Ukuba iarhente ibonakalisa icala layo lokonwaba, luphawu olukhulu.
Thatha i-Semalt's kwi-ofisi mascot, Turbo Turtle, njengomzekelo. Waba yinxalenye yeqela likaSemalt xa babefudukela kwiOfisi entsha ngo-2014, apho umqeshi wangaphambili emshiye khona. Ngoku uyabunandipha ubomi kwi-aquarium enkulu, kwaye nokuba neprofayile yakhe yabasebenzi (ungumntu oza kufumana udliwanondlebe) kwiwebhusayithi!
Konke kuyo yonke, uSemalt ubonelela ngokubhaliweyo okuqinisekileyo kwinto enokujonga kuyo kwi-SEO egcwele-ngokupheleleyo nakwiarhente yentengiso. Inika uluhlu olupheleleyo lweenkonzo zokuyila, ihlolisiswe kakuhle, inerekhodi eqinisekisiweyo, kwaye inika zonke ezi zibonelelo ngexabiso elihle.
Ngaphezu koko, xa usebenze kunye neenkampani phantse kuwo onke amazwe emhlabeni, unokuqiniseka ukuba uSemalt uthetha ulwimi lwakho lwenkobe! Iqela leSemalt lisazi kakuhle isiNgesi, isiFrentshi, isiTaliyane, isiTurkey, isiUkraine, isiRashiya nezinye iilwimi ezininzi.
Ke, ukuba ufuna iarhente enokukunceda ukuba ishishini lakho liye apho lifune ukuya khona, kutheni ungakhethi uSemalt?